musha NAYE AMERICAN SoCCER STORI Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Captain America". Nhoroondo Yedu yechiKristu yeChidiki Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zuva. Kuongorora kunosanganisira mhuri yake, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hungu, munhu wese anoziva kuti ndeye wevatambi vekubheka yepamusoro yeU.SA. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezvechiKristu Pulisic's Biography iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwokutanga & Mhuri Yacho
Kutanga kubva, Christian Mate Pulisic akazvarwa musi we 18th waSeptember 1998 muHershey kuPennsylvania, USA. Akazvarwa kuna amai vake Kelley Pulisic uye kuna baba vake Mark Pulisic. Vose vaviri vabereki vane zvemitambo vanoratidzirana vakaroorana vanoita vashandi vekutambira pa George Mason University.
Vechidiki Pulisic vakakurira muPennsylvania vachifara nekambani yevabereki vose pamwe chete nehanzvadzi yake DeeDee uye mukoma-danho uyo asingazivikanwi nezvake. Pulisic yakada kutamba nhabvu semucheche, mutambo wakauya zvakasununguka kwaari usina kutaurirwa kuutora semusana wemutambo. Kutaura zvazviri, baba vaPulisic vanoyeuka kuti pakutanga akaedza kumvhiringidza mwana wake kubva kumutambo kuitira kuti ave nechokwadi chekuti mwana aifarira mumutambo akanga ari oga.
"Takapotsa takamumanikidza kune dzimwe nzira kunze kwebhola. Haana kumanikidzwa nenzira ipi zvayo. Ndaida kuve nechokwadi kuti ari kuita sarudzo. Zvinhu hazvishande kana uri kumanikidzira kurovedza vana. "
Nyaya dzaMark Pulisic pamusoro pemwanakomana wake anofarira kare mubhoza.
Rudo rwekutsvaga kwebhola rwebhola rwakatora kumusoro kunotanga ku2005 apo amai vake Kelly vakapiwa ruzivo rwekushanda kune imwe nyika pane imwe shanduro yekudzidzisa kuEngland kwegore rimwe. Kubudirira kwakaona Pulisic inobatana nevabereki vake nekubva kunyika yeChirungu apo yakatanga kutamba makwikwi ebhora.
Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Career Buildup
Paakasvika kuEngland, Pulisic nevabereki vake vakagara muTackley, musha wakadzikama, wakanga uri makiromita mashoma kuchamhembe kweOxford. Paaiva paTackey, baba vaPulisic havana kupedza nguva yekunyora mudiki wemakore 6 mukugadzirwa kwevechidiki kweguta reBrackley, iro riri 18.0 makiromita (30 maminiti inotya) kubva mumusha.
Zvakanga zviri kuBrackley guta rePulisic raive nerwavo rwekutanga rwekukwikwidza kwebhora kwegore, vachitamba pose pose mukana unozviratidza kuchikoro, kusati kwave kuchikoro, mushure mekuchikoro, pamwe neboka rake mumitambo yekunze, pakupera kwevhiki nevabereki vake uye akabatira mapaki uye nzvimbo dzekutamba kuitira kufara kwevabereki vake.
Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Road To Fame
Vatatu vakadzokera kuAmerica ndokugara kugara kuMichigan mushure mekuguma kweamai vaPulisic vachidzidzisa purogiramu yokuchinjana. Zvisinei, pakanga pasina kuguma kwekuda kwechidiki sezvaaitora kubva kwaakaenda kuEngland nekuitamba kuMichigan Rush. Aive nekambani kwemwedzi mishomanana vasati vadzokera kumusha wePennsylvania.
Nguva yakatarwa nguva iyo vabereki vechiPulisic vakaita kuti mwanakomana wavo aite basa rebhola basa rinokosha zvakanyanya kuburikidza nekumunyorera kuSouth Soccer Development Academy, PA Classics. Pulisic akapedza makore manomwe pachikwata ichirwisana nevana vakanga vakwegura kupfuura iye. Makore gare gare Pulisic akabudirira aizoona kuti aigona kungoenda zvakanaka pa PA Classics nekuda kuzvitenda
"Pandaimbogara ndiri mutambi muduku kudarika, ndaisakwanisa kushandisa unyanzvi hangu hwepanyama ... ndinongoda kuvarova nepfungwa dzangu."
Kukwanisa kutaura, kwaiva pa PA Classics iyo Pulisic yakateya nheyo dzehutano hune maitiro ekutamba kwake.
Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
2014 yaiva gore rinofadza rePulisic iyo nyenyeredzi yakanga isina simba yakaonekwa uye yakachengetedzwa neGermany guru guru Borussia Dortmund. Kuchinja kwake kubva kuUnited States kusvika kuEurope Country Germany kwakange kusine zvikwereti zvichibva pakuti iye ane vagari venyika dzeU.S. naCroatia (uyewo muEurope). Ikokupedzisira iyo inorevawo kuti EU vagari venyika yakagadziriswa nyore nyore nekurukuru wake weCroatia-akaberekerwa, Mate, uyo uyo Pulisic akagamuchira zita rake rapakati.
Achizivisa kubva kuApp Classics kuenda kuBorussia Dortmund mwana ane tariro ane chivimbo sezvaakaona kuti akanga akagadzirira nyika ine ushingi;
"Ndagadzirira kutsvaga mutsva uyu. Zvichava zvakaoma, asi ndinofunga kuti ndakasimudza. "
Ichokwadi nemashoko ake Pulisic akanyora kubudirira kunoshamisa kubvira paakazosayirwa kuDortmund munaFebruary 2015 uye akaita chikwata chake chechikwata munguva yaro 2-0 kukunda FC Ingolstadt musi we 30th waJanuary 2016.
Akasvika kure, akafambira mberi mumapoka, akawana zvinangwa uye muzviitiko zvakawanda akava mudiki muAmerica mutambi wekugadzirisa uye kuisa zvinyorwa. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Kutevera musikana wacho achimuka mukurumbira, mubvunzo kumuromo wemunhu wese ... Ndiani musikana weChristian Pulisic kana kuti wag? Izvo hazvisi kukanganisa chokwadi chokuti America yakanyorova yakataura ine ramangwana rakajeka remangwana revarume sevanhu vakanaka. Zvisinei, Pulisic ichiri kusina kuroora uye yakanyanyisa kutora Basa rayo kune zvisingambofungidziri zvikomo.
Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu hweMhuri
Pulisic ine mhuri inogadzirira chero rudo rukuru rwaangarasikirwa narwo nekusava nemusikana. tinokuudzai nezvemutambo wemitambo ine rudo mhuri.
Pamusoro pePulisic Baba: Pulisic baba Mark Pulisic akaberekwa musi we 20th waSeptember 1968. iye akarovedza kambani yekambani kuGeorge Mason University pakati pe1986 kusvika ku1989 rekodhi yemakumi matatu nemashanu dzechinangwa chekuita muzviratidzo zve 73. Iye ari panguva yeiyi positi mudzidzisi wepamusoro paPittsburgh Riverhounds. Mark anonyanya kushamwaridzana nemwanakomana wake waanoramba achidzidzisa kusvikira zuva.
Nezveamai vePulisic: Kelly Pulisic ndiye mukadzi asina kungomutsira mwanakomana wake kuti ave Mutambi asiye asi akamudzidzisa unhu Zvidzidzo kuburikidza neBoka, mutambo waakakundawo kuGeorge Mason University muZ1980s. Yaiva paunivhesiti iyo yaakasangana nayo ndokutanga nenyaya nababa vaPulisic, Mark.
Nezvevana vaPulisic: Pulisic ine hanzvadzi ine rudo yakadana DeeDee. Mutambi anomuda kambani uye haamboregi kumusiya paanenge ari kure nemusha.
Kune rimwe, ane mwana wemudzimai uyo asingazivikanwi nezvimwe kunze kwekuti anogara achionekwa mumifananidzo yemhuri seyo iri pasi apa.
Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Zvinotsigirwa
Pulisic inongova 20 yemakore asi atoita hutachiona hutano hunoti hunobatanidza kambani yeChocolate uye yeCocoa - Hershey, American makonti emitambo yakashambadza-mhuka uye zvokudya zvekudya - Gatorade, mitambo yevanhu vemitambo - Panini-America neSoftwear company company - Nike .
panguva ino, zvibvumirano zvakawanda zvinotarisirwa kuuya kuPulisic seNorth America dzichagamuchira 2026 Fifa World Cup.
Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Personal Life Facts
Pulisic ishoko rakanyatsotaura uye rinokuvimbisa rakanakisisa richiri kuuya. Kunyange zvazvo wechidiki anovimba ari oga, ane shamwari dzinoverengeka dzaanogara nadzo pamwe chete uye anopa hukama hwakanaka hwekushanda neboka rake. Anoda mhuri uye aisazopokana, ave shamwari inokosha kumusikana kana mudzimai wake paanozopedzisira atova.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinoonga nekuverenga kwechiKristu chechiKristu chechizvarwa cheChipiri pamwe neS Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.